Vahona : Manatsara volo, manala angadrano !
« Shampoing avocat dop » : manarina volo simba !
Akora fanasana volo azo ambara ho vetivety dia ahitam-bokany ny “shampoing dop” vita amin’ny zavoka. Sady malefaka ny volo no mitazona tsara ny hazozorany.
BLiFe color : Lokom-bolo tsy misy “ammoniaque”, misy menaka “argan”
Isan’ny akora vaovao tonga eto amintsika, nanaitra sy nanintona ity BLiFe color , vokatra italiana ity. Ny mampiavaka azy dia :
« Alcool glycériné » : Manadio nono
Akora azo jifaina eny amin’ireo toeram-pivarotam-panafody ny « alcool glycériné ». Vitsy mpahalala izy kanefa afaka ampiasaina hanadiovana sady hamandinana hoditra ihany koa.
« Alcool glycériné » : manadio tanteraka !
« Gommage doux » amin’ny vahona an’i Evoluderm
Ilain’ny hodi-tava, indrindra rehefa mananika ny 30 taona, ny « gommage ». Ankoatra ireo atao amin’ny akora natoraly, izay tena tsara ho an’ny hoditra, ho an’ireo te hampiasa akora voavoakatra kosa dia mila jerena ireo antsoina hoe : malefaka na « doux ». Ity an’i Evoluderm ity izao mety tsara.
Azo araraotina hitaizana ny volo simba ny toetrandro avy orana tahaka izao. Tsara kokoa mantsy raha mba omena aina kely ny volo ka tsy atao amin’ireny fitaovana fanaovam-bolo ireny ka tazonina ho natoraly. Fomba iray hanatsarana azy ny fampiasana ny dintina vahona.
Vahona lava iray no ilaina. Esorina ny dinty ao anatiny. Potsehina ao anaty “mixeur” izany. Maka bà “collant” manify, efa tsy miasa intsony ary tantavanina amin’izany ilay dintina vahona. Ilay vahona azo amin’izany no ampiasaina.
· Rehefa avy manasa loha, vita ny “shampooing” sy ny “masque” dia hosorana izany ny volo sy ny hodi-doha. Tsy kobanina.
· Azo ahosotra amin’ny loha mialohan’ny hanasana azy. Lomana 30 minitra vao kobanina.
Cadrée : Manala angadrano, manamandina, manatsara ny hodi-doha sy ny tahom-bolo ny vahona. Ireo olona mitaiza volo ho “frisé” no tena tsara mampiasa azy.
Vidiny : 500Ariary ny tahony kelikely iray.